August 2011 ~ ကိုစောဂျက်
Icon 1, 500.000 all for you
19:56 Ko Saw No comments
28/ 8/ 2011
Icon လှလှလေးတွေ အလိုရှိသူများ အတွက် Icon 1, 500.000 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ downloads လုပ်ပြီးရင် CD တစ်ချပ်နဲ့သာ ဘန်းပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဖိုင့် ၅ ဖိုင့် ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
Part 3/ part 4
Power Data Recovery 6.5.0.1
11:50 Ko Saw No comments
27/ 8/ 2011
ဒီဟာက Power Data Recovery 6.5.0.1 ပါ။ Serial number လည်း အထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
downloads links 1
downloads links 2
Power Data Recovery іѕaread-οnƖу File Recovery Software аnԁ Data Recovery Software. Power data recovery software сουƖԁ hеƖр уου recover аƖƖ уουr data nο matter thе data іѕ lost bу accidental deletion, format, re-partition, system crash οr virus attack. Power data recovery іѕ аbƖе tο scan уουr device sector bу sector tο recover whаt еνеr left οn уουr device. Power Data Recovery provide deep scan module whісh саn scan аnԁ analyze raw data format including Micsoft Office files, digital graphics/pictures, audio/video files. Please visit deep scan page fοr complete raw file format list.
486 οr Pentium-class processor
IDE/SATA/SCSI hard drive
100 MB οf free space
A second hard disk іѕ recommended fοr recovery.
10:10 Ko Saw No comments
26/ 8/ 2011
ဒါကတော့ ISOBuster_Pro ပါ။ iso ခွေတွေ ဘန်းချင်တဲ့ သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 4>MB ပဲရှိပါတယ်။ key number ပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ သူရဲ့ လုပ်နိုင်ချက်တွေကို အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်လို့ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
CD DVD BD and HD DVD file data recovery !
IsoBuster is an award winning highly specialized and easy to use CD DVD and blu-ray (BD HD DVD) data recovery tool.
It supports all CD / DVD / BD / HD DVD formats and all common file-systems ... Rescue lost files fromabad or trashed CD or DVD disc save important documents precious pictures video from the family your only system backup ... IsoBuster can do it all !
IsoBuster interprets CD image files such as:
*.DAO (Duplicator) *.TAO (Duplicator) *.ISO (Nero BlindRead Creator) *.BIN (CDRWin) *.IMG (CloneCD) *.CCD (CloneCD) *.CIF (Creator) *.FCD (Uncompressed) *.NRG (Nero) *.GCD (Prassi) *.P01 (Toast) *.C2D (WinOnCD) *.CUE (CDRWin) *.CDI (DiscJuggler) *.CD (CD-i OptImage) *.GI (Prassi PrimoDVD) *.PXI (PlexTools) *.MDS (Alcohol) *.MDF (Alcohol) *.VC4 (Virtual CD) *.000 (Virtual CD) *.B5T (BlindWrite) *.B5I (BlindWrite) *.DMG (Apple Macintosh) *.IBP (IsoBuster) *.IBQ (IsoBuster) *.NCD (NTI).
Security Task Manager 17
14:46 Ko Saw No comments
25/ 8/ 2011
ဘော်ဒါ တစ်ယောက် တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Security Task Manager 17 ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ 6>MB ပဲရှိပါတယ်။ crack ဖိုင့် ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
Your Uninstaller! Pro 7.0.2010.8
14:15 Ko Saw No comments
25/ 8/ 2011 (NEW UPDATE 6/3/3013)
ဒါကတော့ Your Uninstaller! Pro 7.0.2010.8 ပါ။ အသုံးမပြုချင်တော့တဲ့ softwares တွေကို ပြန်ဖြုတ်တဲ့ နေရာမှာ ဖိုင့်အစအန မကျန်အောင် ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ 5>MB ပဲ၇ှိပါတယ်။ key number ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အလိုရှိသူများ downloads ကို ဒီမှာ ဆွဲလိုက်ပါ။
16:29 Ko Saw No comments
18/ 8/ 2011
ဒါကတော့ Internet.Download.Manager.6.05 ပါ။ အားလုံးသိပြီးသာပါ။ မရှိသေးတဲ့ သူများနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကြိုက်တဲ့ သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ keygen ပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် register လုပ်ပြီး သုံးလိုရပါတယ်။ သူကို Install သွင်းပြီးရင် del ဖိုင့်ထဲက ဟာတွေကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Internet Download Manager မှာ paste ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် keygen ဖိုင့်ကို ဖွင့်ပြီး register လုပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာ သူအချက်အလက်တွေကို ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။ အလိုရှိသူများ ထုံးစံအတိုင်း အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Release Notes :-
Cracked by...: BRD Cult
Suplied......: BRD Cult
Packaged.....: BRD Cult
Type.....: Keygen & Patch
1.) Unpack and install
2.) Make sure the program is not
running on background
3.) Copy cracked file(s) over original(s)
4.) Use our keygen to register
11:35 Ko Saw No comments
video တွေကို Converter ပြောင်းချင်သူများ အတွက် Total Video Converter HD v3.71 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက Pocket player(mobile)/ Conver & burn/ Web/ Video file/ audio file နဲ့ AVCHD & HD video အတွက်ဆိုပြီး software မှာ ၆ ပိုင်း အဓိက ခွဲထားပါတယ်။ 15.MB ပဲရှိပါတယ်။ serial number ပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
links 1ကဒီမှာ / links2က ဒီမှာ
သူ supports လုပ်နိုင်တာတွေကို အောက်မှာ ကြည်ရူနိုင်ပါတယ်။
18:37 Ko Saw No comments
17/ 8/ 2011
ဒါကတော Portable Adobe Photoshop CS4 ပါ။ ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး တစ်ခါထဲ သုံးရုံပါပဲ။ full ဗာရှင်း အတိုင်း စွမ်းဆောင်မှုကတော့ အပြည့်ပါပဲ။ adobe photoshop cs4 ကတော့ Protable ပါ၊၊120MB ရှိလို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ထားပေးပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
adobe photoshop cs4 part 1 downloads ကဒီမှာပါ
adobe photoshop cs4 part2downloads က ဒီမှာပါ။
Power CD DVD Recovery 2.1.1
17:51 Ko Saw No comments
17/ 08/ 2011
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ CD/DVD တွေ ဟောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထားအသို မတတ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်လို့မရတာတွေ ကြုံတတ်မှာပါ။ အဲလိုကြုံတွေအခါကျရင် ဒီ Power CD DVD Recovery 2.1.1 နဲ့ပြန်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ သူ Supportsလုပ်တာတွေက CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW and DVD-RAM တွေပါ။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ Serial number အတွက်လည်း မပူပါနဲ့။ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ 2.MB တောင် မပြည့်ပါဘူး။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Pentium-class processor, 64MB RAM (128 MB recommended), Windows NT/2000/XP/2003/Vista, 100 MB of free space. And we strongly recommend to use DVD-RW drives ("dvd writers"). DVD-ROM drives ("dvd readers") often can not access to the "troubled" or non-finalized DVD discs.
Portable PC game 265
16:32 Ko Saw No comments
16/ 8/ 2011
Games ချစ်သူများ အတွက် Portable PC game 265 မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ games ကို တစ်မျိုးချင်းစီ ရွေးပြီး downloads လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ http//:pcgametrends.blogspot.com ကနေ ပြန်ပြီး ရှယ်ယာလုပ်ထားပေးတာပါ။ အားလုံးကို www.megaupload.com ဆိုဒ်ကနေ တင်ထားပေးပါတယ်။ games ချစ်သူများ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ games အမျိုးအစားကို အောက်မှာ ကြည်ပြီး downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
20 Flash Shooter Games
Action Ball2v1.1
Age of Atlantis 1.0
Framing Studio v3.51 Portable
13:26 Ko Saw No comments
Framing Studio v3.51 Portable က ကိုယ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Framimg studio အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ အပြင် Effects ပါ တွဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ Serial number ပါ အထဲမှာ ပါပါတယ်။ 4.MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
downloads links 1 ဒီမှာပါ
downloads links2ဒီမှာပါ ဆွဲလိုက်ပါ။
12:39 Ko Saw 1 comment
3/ 8/ 2011
Teamviewer က ကွန်ပြုတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အဝေးတစ်နေရာကနေ ဝင်ကြည့်လိုရပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွန်ပြုတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကူအညီပေးတာတွေ၊ သင်ပြပေးတာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Free Softwares ပါ။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင် ရှိနေဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူကို install သွင်းပြီးရင် ပုံမှာပုံထားတဲ့ အတိုင်း ID နဲ့ Password ဘေးနာမှာ စကားဝှက်ကုတ်နိပါတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ID နဲ့ Password ကို တစ်ဖက်လူကို ပေးလိုက်ယုံနဲ့ ကိုယ်ကွန်ပြုတာထဲကို သူဝင်ရောက်လာလို့ရပါတယ်။ အဲလိုမျိုးပဲ တစ်ဖက်ကွန်ပြုတာကို ကိုယ်က ဝင်ရောက်ချင်တယ် ဆိုရင် သူဆီက ID နဲ့ password ကို ကိုယ်တောင်းထားရပါမယ်။ ပြီးရင်
(၁) create session အောက်က ID အကွက်မှာ ကိုဝင်ချင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ ID စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
(၂) remote support မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
(၃) connect to partner ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
(၄) ခဏလေးကြာရင် password တောင်းလာပါလိုက်မယ်။ တစ်ဖက်ဆီက password ကို ရိုက်ထည့်ဖို့ အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
(၅) password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ .. အဆင်ပြေပြေနဲ့ တစ်ဖက်ကွန်ပျူတာကို ၀င်လို့ရသွားပါပြီ .. ကွန်ပြုတာကို Restart တစ်ခါချရင် ID နဲ့ Password တစ်လုံးပြန်ပြောင်းပါတယ် .. နောက်တစ်ခါ ထပ်ဝင်ချင်ရင် ID နဲ့ Password ကို နောက်တစ်ခါ ပြန်တောင်းရပါမယ်။
အလိုရှိသူများ ဒီမှာ ဒေါင်းလောင်ဆွဲပြီး install သွင်းလိုက်ပါ။ မူရင်းဆိုက်မှာ သွားပြီး downloads ဆွဲလည်းရပါတယ်။ မှာရင်းဆိုက်က ဒီမှာပါ။ http://www.teamviewer.com/en/index.aspx
သင့် အတွက် မြန်မာ ဘလော်ဂါများ
Follow by Email ( Email ကနေ့ စောင့်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် )
Zawgyi Download လုပ်ရန်
Zawgyi-one Font Zawgyi-Installer Download Keyboard Zawgyi-link Zawgyi-Taping
Myanmar typing လေ့ကျင်းလိုသူများ အတွက်
6 /3/ 2012 Myanmar typing လေ့ကျင်းလို့သူများအတွက် ဒီ Myanmar typing လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံလေးကို ကြည်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုက်တယ်ဆို...
မြန်မာ fonts 60 နဲ့ zawgyi font
လူသုံး အများဆုံး မြန်မာ ဖောင့် အမျိုးပေါင်း ၆၀ ကို လိုချင်တဲ့ လူတွေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ zawgyi font / win fonts/ စတဲ့ ဖောင့် တွေ အားလံ...
Need For Speed5ပြိုင်ကားဂိမ်း ကစားလိုသူများ အတွက်
15/5/2013 ပြိုင်ကားဂိမ်း ကစားလိုသူများ အတွက် Need For Speed5ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီး။ http://ww...
English Myanmar Typing Tutor 5
မြန်မာစာ လက်ကွက် လေ့ကျင်လိုသူများ အတွက် English Myanmar Typing Tutor ပါ။ English စာကိုလည်း လေ့ကျင်လိုရပါတယ်။ CE Myanmar font နဲ့...
Nero 8 အလိုရှိသူများအတွက်
18/1/2013 (NEW UPDATE 2/3/3013) Nero 8 အလိုရှိသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အရင်ကလည်း Nero 8 ကိုတင်ထားပေးဖူးပါတယ်။ downloads l...
SuperRam6နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ Ram ကို ထိန်းသိမ်းရအောင်
(NEW UPDATE 6/3/3013) ဒါကတော့ SuperRam6ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာ မှာ Ram အားနည်းနေ့ရင် ဒီ SuperRam6နဲ့ အား ပြန်မြှင့်လိုရပါတယ်။ ကွန်ြ...
E book သုတ၊ရသ စာအုပ်များ ဖတ်ချင်သူများအတွက်
17/1/2013 ဒီနေ့ စာပေချစ်သူများ အတွက် မြန်မာ E book စာအုပ်များကို စုစည်းပေးထာတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို လမ်းညွန်ပေးချင်ပါတယ်။ Knowledge & Wisd...
downloads လင့်များကို update ပြန်လုပ်ပေးနေပါသည်။ (6/3/2013)
၆ ရက် ၃ လ ၂၀၁၃ ရက် downloads လင့်များကို ပြန်တင်ပေးထားပေး Softwares များ (၁) adobe photoshop cs3 နဲ့4အလိုရှိသူများ အတွက် (၂) Nero...
Sim Card Data doctor Recovery နဲ့ ကိုယ်ဖုန်းကဒ်ရဲ့ အချက်အလက်ကို ပြန်ရှာရအောင်
ကဲ... ဒါကတော့ Sim Card Data doctor Recovery 3.0 ပါ။ ကိုယ်ဖုန်းဆင်ကဒ် က အချက်အလက်တွေကို ပြန်ရှာလိုရပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ messages အဝင် အထွက်၊ pho...
adobe photoshop cs3 နဲ့4အလိုရှိသူများ အတွက်
13/2/2013 (NEW UPDate 2/3/3013) adobe photoshop က cs6 အထိတောင် ထွက်နေပါပြီး၊ ကျွန်တ်ာက cs3 နဲ့ cs4 ကို လာတင်နေတော တစ်ချို့လူတွေက အမြင်ေ...
adobe Photos cs5 သင်ခန်းစာများ (1)
Disk Cleaner (6)
Driver Scanner (2)
Editor video softwares (2)
Error software (3)
Iso Softwares (2)
myanmar calendar (1)
office converter (2)
Portable PC game (4)
Security Softwares (3)
Uninstaller Softwares (1)
Unlocker 1.9.1 (1)
Video and Audio (9)
window7activator (1)
windows 8 activator (3)
မြန်မာ windows (1)
Phone နှင့် ပတ်သက် သမျှ ဒီလင့်မှာ လေ့လာမေးမြန်နိုင်ပါတယ်
Copyright © 2011 ကိုစောဂျက် | Powered by Blogger